China BONISA CS2 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Ukuhambisa okugqwesileyo kunye namava okuqhuba kukukhokelela kwikamva elinombono
Uhlobo lwepetroli Idizili / ipetroli
Uhlobo lokuqhuba 4 * 2
Ukukhupha I-Euro IV / V
Ibhokisi yemiyalezo 5TM
Isiseko samavili 2570/3110
Ilifa kwilifa kunye nokuzinikela kwinto entsha, i-VIEW S ibonakalisa umoya wobuhle kuzo zonke iinkcukacha zoyilo. Ukusukela imfezeko esithubeni, ukusebenza, ukhuseleko kunye nokusebenza akupheli.
ISF2.8-Isiseko samandla esomeleleyo esivela eCummins; Amandla angama-96KW-Strong; Amandla awomeleleyo-Elinye lawona mandla aphezulu elitha nganye kwiinjini zomsebenzi weedizili emhlabeni; Injini ine-torque ephuma kwi-280N.M eyi-22.5% -60% ephezulu kunezo zeemveliso ezifanayo; Ukukhutshwa okuphezulu kwe torque kwi-1400 r / min; Ukusetyenziswa kwe-Fuel 8.3L nge-100 km.
Kumgca-4-isilinda, 16 -valve, SOHC, Eorte ECA
Ukwamkela i-shaft shaft ezimbini, i-tappet ye-hydraulic, ingalo ye-rocker eneenaliti ezithweleyo, ukudityaniswa okuphambili kwentloko kunye nokuqinisa
Inika amandla aphezulu, ukwenziwa kwe-compact, ukungcangcazela okuphantsi, ingxolo ephantsi, ukusetyenziswa kwepetroli okuphantsi, ukukhutshwa okuphantsi, njl.
Kwicala lomqhubi / kwicala labakhweli ngaphambili
Isando sokhuseleko sonyusa imeko yokhuseleko kwimeko engxamisekileyo
Ifestile yokubaleka ngaphezulu
Ifestile yokubaleka ngaphezulu iqinisekisa ukhuseleko lwakho